रुपन्देहीमा व्यापारीमाथि गोली प्रहार? सुरक्षा खै - व्यापारी - Sanibar News
रुपन्देहीमा व्यापारीमाथि गोली प्रहार? सुरक्षा खै – व्यापारी
रुपन्देहीको मणिग्राममा शुक्रबार विहान गोली चलेको छ। मणिग्राम स्थित श्रीसा मार्वलका सञ्चालक दुर्गालाल भण्डारीलाई लक्षित गरी गोली प्रहार भएको छ।
तर मानवीय क्षति भने हुन पाएन। मोटरसाइकलमा आएका दुई जना पसलभित्रै पसेर गोली चलाएको बताइएको छ। हेलमेट लगाएर पसलमा पसेका उनीहरुले दुई राउण्ड गोली चलाएको स्थानीयले बताएका छन्। गोली फायर गर्नसाथ उनीहरु भागेको प्रत्यक्षदर्शीले जनाएका छन्। मोटरसाइकलको नम्बर समेत पहिचान हुन सकेको छैन।
घटनाको मनोज पुनले जिम्मा लिएका छन्। उनी बुटबल र आसपासका क्षेत्रमा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका छन्। पुनले व्यापारी भण्डारीका छोरा दिपकलाई फोन गरेर आफ्नाे समुहले गोली चलाएको बताएका हुन्। ३०लाख चन्दा मागेको तर नदिएका कारण गोली चलाएको फोनमा पुनले बताएको दिपकले जानकारी दिए। पुनले थप आक्रमण गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
Previous राजपा मा कलह, आधा दर्जन नेताद्वारा बैठक बहिष्कार
Next खिम्तीका बाढीपीडित कहाँ बस्ने सरकार ?